Edemede site na Erik Severinghaus
Erik na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ ma na-ebute ha n'ahịa ruo afọ 20, na-akpata ọtụtụ narị nde dollar nke ọpụpụ na ego ha nwetara. Tupu na-eduga atụmatụ na N'oge opupu, Erik bụ onye guzobere na onye isi nke SimpleRelevance, usoro mmụta igwe dị elu tozuru etozu iji bulie ahịa dijitalụ. Na 2015, SimpleRelevance rere ya na Rise Interactive, ebe Erik duuru Nchịkwa Akaụntụ na ngalaba azụmaahịa nkeonwe.
Arụ ọrụ: Omume Kacha Mma maka Akpaaka Ngalaba Azụmaahịa Taa
Na oge nke ire ahia ọdịnaya, mkpọsa PPC na ngwa mkpanaka, akụrụngwa ochie dịka pen na akwụkwọ enweghị ebe ọ bụla na ahịa ahịa taa. Otú ọ dị, oge na oge ọzọ, ndị na-ere ahịa na-alaghachi na ngwá ọrụ oge ochie maka usoro ha dị mkpa, na-ahapụ mkpọsa maka njehie na nkwukọrịta. Imejuputa oru ndi akpaghị aka bu otu n’ime uzo kacha nma iji wepu ahihia ndia. Site na ngwaọrụ ndị ka mma, ndị na-ere ahịa nwere ike ịkọwapụta ma rụọ ọrụ ugboro ugboro, ọrụ ha siri ike,